Rooble doorashadda Aqalka Hoose maku qaban karaa hal bil? | KEYDMEDIA ENGLISH
Rooble doorashadda Aqalka Hoose maku qaban karaa hal bil?
Xareynta iyo diiwaangelinta ergada iyo tababarkooda baa qaadan karta in ka badan labo bilood, waxaana laga yaabaa in waqtiga intaas ka bato.
MUQDISHO, Soomaaliya - Caqabado badan ayaa ku hor-gudban in doorashadda Aqalka Hoose ay si dhaqso ah lagu soo gabagabeeyo, waxaana kamid ah waqtiga oo aad u yar, diyaaragrow fiican oo uusan jirin, dhaqaalaha iyo khilaaf meelaha qaar ka taagan, sida Hiiraan iyo Gedo.
Waxaa kaloo horyaalla doorashadda caqabad dhaqaale, oo hadii aan si deg deg ah loo helin qarashka aysan suurtagal ahayn in ergo la xareeyo, diyaarado lagu daabulo sidoo kalena meel loo kireeyo, iyadoo agabka doorashadda meelaha qaar aan wali la gaarsiin.
Dowladdu waxay dalbatey $3.7 milyan, oo Mareykanka, UK iyo Norway waydiissatay, kuwaasoo bixinta lacagta shuruudo adag dul-dhigay, kuwaasoo ay kamid tahay in doorashadda ka billaabato ugu yaraan saddex Maamul Goboleed. Waxay sheegeen in iyadoo aan waxba socon aysan lacag bixin doonin.
Sidoo kale, Khilaaf aan wali la xalin baa jira Gedo iyo Hiiraan, oo kamid ah degaan doorashadda Jubbaland iyo HirShabeelle, waxaana xalinta tabashadda beelaha ay qaadanaysaa waqti badan. Marka la eego caqabadahan xooggan, suurtagal ma noqon karta in 30 maalmood lagu soo gabagabeeyo doorashadda Gollaha Shacabka ee BFS.
Gudiga doorashadda Heer Federaalka [FEIT], ayaa ku fashilmay dhowr jadwal doorasho oo uu soo saarey sanadkan, waxaana la filayay in 10-kii Oct la doorto Madaxweynaha, balse xitaa aan la dhameynin Aqalka Sare doorashadiisa oo 54 kursi ah.
Dhinac kasta doorashada waxaa ka taagan caqabad, waxayna Rooble ka dhigtay mid ku jahwareersan mida uu xalin lahaa, isagoo aan haysan wadashaqeyn fiican Madaxda Maamullada dalka, oo qaarkooda lugooyo ku haya.